मकै खानुका यस्ता छन् फाइदै फाइदा- क्यान्सरको समेत खतरा कम हुन्छ ! - Nawalpur Dainik
मकै खानुका यस्ता छन् फाइदै फाइदा- क्यान्सरको समेत खतरा कम हुन्छ !
March 5, 2021 by Nawalpur Dainik
काठमाडौं- भदौ महिना नेपालमा हरिको मकै खाने मौसम हो । सिजनमा मात्रै हाेइन मकै वर्षै भरि पाउन सकिन्छ । सुकेको मैक भुटेर खान सकिन्छ । मकैमा शरिरको पोषणका लागि आवश्यक सबै प्रकारको मिनरल्स पाइन्छ । मकै यस्तो खाद्य पदार्थ हो जसले मानिसको स्वास्थ्यलाई निकै फाइदा पुर्‍याउछ ।
मकैको सेवनले शरिरमा जमेको अतिरिक्त बोसो अर्थात् कोलेस्ट्रोलाई कम गर्ने सबैभन्दा असरदार तरिका हो । मकै खादा तौल घट्नुका साथै अन्य रोगको निराकरणका लागि पनि निकै फाइदा हुन्छ । मकैमा भिटामिन सी, बायोफ्लेविनाइड्स, क्यारोटेनाइड र फाइबरको मात्रा धेरै पाइन्छ । यसले कोलेस्ट्रोललाई कम गरेर धमनीहरु ब्लक हुनबाट रोक्छ । यसमा पाइने फाइबरले कोलेस्ट्रोललाई नियन्त्रित गर्न सहायक गर्दछ ।
मकैमा पाइने एन्टी अक्सिडेन्ट र फ्लेवेनाइड तत्वका कारण क्यान्सरजस्ता खतर’नाक रोगको खतरा पनि कम हुन्छ । यसका साथै यसले फ्रि रेडिकल्सबाट हुने नोक्सानीबाट बचाउँछ । मकैमा पाइने फेरुलिक एसिड, स्तन र कलेजोको ट्युमरको आकारलाई पनि कम गर्नमा सहयोग गर्दछ । हड्डीलाई बलियो बनाउनका लागि तपाईं दुध र भिटामिन डी को सेवन गर्नुहुन्छ । तर तपाईंलाई थाहा नहोला, मकैमा पाइने जिंक, फोस्फरस, म्याग्नेसियम र आइरनले हड्डीलाई बलियो बनाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउने गर्दछ । यसका साथै यसले बाथ रोगको सम्भावना पनि कम गर्दछ ।
Prevदिनहुँ किसमिस भिजाएर खानुका यस्ता छन् फाइदै फाइदा। जानिराख्नुहोस्
Nextयस्ता छन् ब्रोकाउली खानुका फाइदैफाइदा जान्नुहोस् !